Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → mars → 19 → Farafangana : Zafisoro sy Antefasy, vita ny ady, nihavana ny foko roa
Ela ny ela. Tontosa teto Farafangana ny lanonana manetriketrika ara-pomban-drazana ny amin’ny fampihavanana ireo foko roa, ny Zafisoro sy ny Antefasy. Natrehan’ny tompon’andraiki-panjakana isanisany notarihin’ny Praiministra Jean Ravelonarivo, izay zanaky faritra rahateo sady nialoha lalana ny Filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina, hitarika ny lanonana ofisialy anio.
Manga tanteraka ny lanitra amin’ny lafiny rehtra teto amin’ny renivohitry ny Faritra Atsimo Antsinanana. Tsiky, hafaliana no hita misoritra eny amin’ny endrik’ireo mponina, izay niaina tao anatin’ny tebiteby sy sakantsakana hatramin’izay. Tontosa omaly tokoa mantsy ny fomba malagasy nentina nampihavanana ireo foko roa, izay efa nifandrafy hatramin’izay, dia ireo Antefasy sy Zafisoro, araka ny tononandro nosafidian’ireo andaniny sy ny ankilany. Tao anatin’ny fety makotrokotraka tokoa no nandraisan’ireo mponina an’ity tranga voalohany nisy teo Madagasikara ity, izay ho voarakitra ao anatin’ny tantaram-pirenana.« Faly tanteraka izahay amin’izao. Afaka hiara-miaina ara-dalàna amin’izay mantsy izahay, tsy hisy intsony ireo sakantsakana isan-karazany. Ary inoanay fa dia handroso amin’izay ity faritra misy anay ity », hoy ireo mponina nientam-panantenana indray. Marihina fa efa an-jato taona no nisian’ity disadisa teo amin’ireto foko roa ireto. Niteraka fisaraham-bazana tanteraka teo amin’ny roa tonta izany ary nisian’ny rà nandriaka mihitsy aza teo aloha.Teo anatrehan’izay dia efa maro ireo fiezahana handravona ity olana ity tany aloha tany kanefa dia zary nandamaoka avokoa. Ankehitriny, voavaha ny olana, nanaiky ny hihavana ireto foko roa ireto.
Azo lazaina fa tratra ny tanjona ho an’ireo mpitondra ankehitriny. Isan’ny politika ankapobeny ary tena vaindohan-draharahan’ny Fanjakana ny fampihavanana ny samy Malagasy. « Tao anatin’ny fahalalahana tanteraka no nanek’ireto foko roa ireto hihavana. Tanteraka ity ny an’ireo Antefasy sy Zafisoro, eny fa dia eo aza ny sakantsakana nisy», hoy ny Praiministra nandritra ny lahateny nataony. « Isaorana indrindra ny Filohan’ny Repoblika nanaiky sy nanome alalana hanantanterahana ity lanonana androany ity », hoy izy. Niarahaba ireto foko roa nifandrafy ka zary nihavana indray ny Praiminisitra. « Arahabaina eto sahady ihany koa, hoy izy, ireo foko hafa, izay vonona ny hiditra amin’izay fanamafisana ny fihavanana izay, satria ilaina tokoa izany mba hisian’ny tena fampandrosoana». Ampanjaka 13 avy eto amin’ny Faritra Atsimo Atsinanana, avy amin’ireo foko Antefasy sy Zafisoro, no tonga nanantanteraka ity fomban-drazana natao hampiahavanana nyroa tonta. Araka izay, nisy ny fafirano natao sy ny famonoana ny omby « mazava loha » nentina nanamarika izany famitranam-pihavanana izay indray. Izany dia natao teo anoloan’ny tsangam-batom-pahatsiarovana, izay hotokanan’ny Filohan’ny Repoblika anio. Samy nisaotra ny fitondram-panjakana avokoa ireo solontenan’ireo ampanjaka avy amin’ny andaniny sy ny ankilany, tamin’ny fandraisam-pitenenana nataon’izy ireo. Tonga nanotrona sy nanao vavolombelona ity fanamafisana fihavanana ity ihany koa tetsy an-danin’izay ireo ampanjaka avy any amin’ny faritra hafa. Taorian’ny lanonana dia niray latabatra tao anatin’ny firahalahiana tanteraka ny rehetra tamin’ny alalan’ny nofon-kena mitam-pihavanana, izay natao teto Farafangana ihany.